အထူးဆနျးဆုံး လကျထပျခှငျ့တောငျးပုံ (၁၀) ခု
Homenewsအထူးဆနျးဆုံး လကျထပျခှငျ့တောငျးပုံ (၁၀) ခု
လကျထပျခှငျ့တောငျးတဲ့အခြိနျဆိုတာ ခဈြသူဘဝရဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာ အကောငျးဆုံး အခြိနျတှထေဲက တဈခြိနျဖွဈပါတယျ။ တခြို့က ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ စိတျကူးတှနေဲ့ပြျောစရာတှေ ပေါငျးစပျပွီး လကျထပျခှငျ့ တောငျးတတျကွပါတယျ။
10. တကျတူးဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
Vinnie Capaldo Smith က သူ့ခွထေောကျမှာ တကျတူးထိုးပေးဖို့ သူ့ကောငျမလေး Brooke Wodork ကို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ Brooke က တကျတူးထိုးဖို့ စတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ "ကိုယျ့ကို လကျထပျနိုငျမလား" ဆိုတဲ့ စာတနျးပါတဲ့ ပုံလေးနဲ့အတူ အဖွနှေဈခုကို တှလေို့ကျပါတယျ။ Vannie ကံကောငျးပါတယျ။ Brookeက ဝမျးမွောကျဝမျးသာစှာပဲ "Yes" ဆိုတဲ့အကှကျမှာ ကွကျခွခေတျလေး ထိုးပေးပွီး လကျထပျခှငျ့ကို လကျခံခဲ့ပါတယျ။
9. လငျးပိုငျအဖွူဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
Chigaco က ကောငျလေးတဈယောကျက လကျထပျခှငျ့တောငျးဖို့ကို ထူးထူးခွားခွားစီစဉျခဲ့ပါတယျ။ ကနျထဲက အဖွူရောငျလငျးပိုငျတဈကောငျက "ကိုယျ့ကို လကျထပျနိုငျမလား" ဆိုတဲ့စာပါတဲ့ ဘူးလေးကို ယူလာပေးပါတယျ။ သူ့ကောငျမလေးကို လကျထပျလကျစှပျပေးပွီး ကောငျမလေးဆီက လကျခံတဲ့အဖွကေို ရခဲ့ပါတယျ။
8. ရခေဲမုနျ့ဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
Lum Munsterteiger က သူ့အခဈြလေးအတှကျ အထူးရခေဲမုနျ့ကို လကျထပျခှငျ့ တောငျးဖို့အတှကျ မှာယူခဲ့ပါတယျ။ ရခေဲမုနျ့ဘူးပျေါမှာ သူတို့နှဈယောကျ အပွနျအလှနျပို့ကွတဲ့ emoji လေးတှနေဲ့ "ကိုယျ့ကိုလကျထပျနိုငျမလား" ဆိုတဲ့ စာလေးပါပါတယျ။ နောကျမှ စူပါမားကတျတဈခုမှာ သူမအတှကျ ရညျရှယျပွီး မှာထားတဲ့ ရခေဲမုနျ့တှကေို မထငျမှတျဘဲ တှသှေ့ားပါတယျ။
7. Harry Potter ဇာတျကားဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
သူကတော့ Harry Potter ဇာတျကားကို အခွခေံပွီး လကျထပျခှငျ့တောငျးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ သူရဲ့ရညျးစား ကတော့ Harry Potter ရဲ့ ဖနျအကွီးစားပါ။ " သူက နှာခေါငျးစညျးကို ခြှတျလိုကျပွီး သူရဲ့ဇနီးအဖွဈ နပေေးနိုငျမလား" လို့မေးတယျ။ ကြှနျမလညျး "နပေေးနိုငျတယျ" ဆိုပွီး အကယျြကွီး ဖွလေိုကျတယျ" လို့ ပွောပါတယျ။
6. ကာတှနျးစာအုပျဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
American Paul Phillips ဟာ သူ့ကောငျမလေး Erika Ramos နဲ့ သူရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးကို ဖျောကြူးထားတဲ့ ကာတှနျးစာအုပျလေးကို မှာယူခဲ့ပါတယျ။ Paul က သတို့သမီးလောငျးလေးကို သူ့ရဲ့ ကာတှနျးစာအုပျလေးဖှကျထားတဲ့ စာကွညျ့တိုကျဆီ ချေါလာခဲ့ပါတယျ။ Erika က ကာတှနျးစာအုပျလေးကိုမွငျပွီး အံ့အားသငျ့သှားပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ Paul ရဲ့ လကျထပျခှငျ့ကို လကျခံခဲ့ပါတယျ။
5. တယျလီစကုပျဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
သူတို့ရဲ့လကျထပျပှဲကို ကွယျတှကေိုယျတိုငျ ဟောကိနျးထုတျခဲ့တယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ သူကတော့ လမငျးကွီးဆီကနေ အကူအညီ နညျးနညျးယူခဲ့ပါတယျ။ " ကိုယျ့ကို လကျထပျနိုငျမလား" ဆိုတဲ့ စာပါတဲ့ တယျလီစကုပျအတှကျ မှနျဘီလူးတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ကောငျမလေးကို လကိုကွညျ့လိုကျဖို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
4. ဂိမျးဆော့ပွီး လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
ဒီပုံထဲက အမြိုးသမီးကတော့ လကျထပျခှငျ့အတောငျးခံရပုံက ထူးခွားပါတယျ။" ကိုယျ့ကို လကျထပျပါ" ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို သူမကိုယျတိုငျ ဆှဲပေးရမှာပါ။ သူမရဲ့ ခဈြသူက ဒူးထောကျပွီး လကျစှပျကို အိတျထဲက ထုတျပွမှ ဂိမျးဆော့နတောမဟုတျဘဲ လကျထပျခှငျ့တောငျးနတောဖွဈကွောငျး သိသှားပါတယျ။
3. Starbucks ကျောဖီဆိုငျတှငျ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
Austin Mann နဲ့ Rather Havenတို့နှဈယောကျလုံးက ခဏခဏခရီးထှကျနရေတာကွောငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆုံဖို့ခကျခဲပါတယျ။ ခရီးထှကျခါနီးဆိုရငျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ အားတကျစဖေို့ လဆေိပျက Starbucks ကျောဖီဆိုငျမှာ စာတိုလေးတှေ တဈယောကျတဈလှညျ့စီ ခနျြထားတတျကွပါတယျ။ Amsterdam လဆေိပျမှာ Esther တှလေို့ကျရတာကတော့ လကျထပျခှငျ့တောငျးတဲ့ စာလေးပါ။
2. GPS Tracker ဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
GPSမှာ "ကိုယျ့ကို လကျထပျနိုငျမလား" ဆိုတဲ့ စာသားပျေါဖို့အတှကျ အပွေးဝါသနာပါသူ Ben Chudly က ကီလိုမီတာပေါငျးမြားစှာကို ပွေးခဲ့ပါတယျ ။ Ben က screenshot ကို သူ့ကောငျမလေး Olivia ကို ပွပွီး လကျထပျလကျစှပျကိုပါ ပေးခဲ့ပါတယျ။
1. အကဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျး
ခဈြသူနှဈယောကျလုံးက ဝါသနာတူတာ ထူးခွားပါတယျ။ Phil Wright က ဒီဝါသနာကိုသုံးပွီး သူ့ကောငျမလေး Ashley နဲ့ အတူတူတှဲကနတေဲ့ အခြိနျမှာ လကျထပျခှငျ့တောငျးခဲ့ပါတယျ။ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ထူးခွားတဲ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခွငျးပါပဲ။
အထူးဆန်းဆုံး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပုံ (၁၀) ခု
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာ ချစ်သူဘဝရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေထဲက တစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ပျော်စရာတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး လက်ထပ်ခွင့် တောင်းတတ်ကြပါတယ်။
10. တက်တူးဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
Vinnie Capaldo Smith က သူ့ခြေထောက်မှာ တက်တူးထိုးပေးဖို့ သူ့ကောင်မလေး Brooke Wodork ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Brooke က တက်တူးထိုးဖို့ စတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ "ကိုယ့်ကို လက်ထပ်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့ စာတန်းပါတဲ့ ပုံလေးနဲ့အတူ အဖြေနှစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ Vannie ကံကောင်းပါတယ်။ Brookeက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပဲ "Yes" ဆိုတဲ့အကွက်မှာ ကြက်ခြေခတ်လေး ထိုးပေးပြီး လက်ထပ်ခွင့်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
9. လင်းပိုင်အဖြူဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
Chigaco က ကောင်လေးတစ်ယောက်က လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ကို ထူးထူးခြားခြားစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ကန်ထဲက အဖြူရောင်လင်းပိုင်တစ်ကောင်က "ကိုယ့်ကို လက်ထပ်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့စာပါတဲ့ ဘူးလေးကို ယူလာပေးပါတယ်။ သူ့ကောင်မလေးကို လက်ထပ်လက်စွပ်ပေးပြီး ကောင်မလေးဆီက လက်ခံတဲ့အဖြေကို ရခဲ့ပါတယ်။
8. ရေခဲမုန့်ဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
Lum Munsterteiger က သူ့အချစ်လေးအတွက် အထူးရေခဲမုန့်ကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းဖို့အတွက် မှာယူခဲ့ပါတယ်။ ရေခဲမုန့်ဘူးပေါ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပို့ကြတဲ့ emoji လေးတွေနဲ့ "ကိုယ့်ကိုလက်ထပ်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့ စာလေးပါပါတယ်။ နောက်မှ စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာ သူမအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မှာထားတဲ့ ရေခဲမုန့်တွေကို မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့သွားပါတယ်။
7. Harry Potter ဇာတ်ကားဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
သူကတော့ Harry Potter ဇာတ်ကားကို အခြေခံပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ရည်းစား ကတော့ Harry Potter ရဲ့ ဖန်အကြီးစားပါ။ " သူက နှာခေါင်းစည်းကို ချွတ်လိုက်ပြီး သူရဲ့ဇနီးအဖြစ် နေပေးနိုင်မလား" လို့မေးတယ်။ ကျွန်မလည်း "နေပေးနိုင်တယ်" ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး ဖြေလိုက်တယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
6. ကာတွန်းစာအုပ်ဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
American Paul Phillips ဟာ သူ့ကောင်မလေး Erika Ramos နဲ့ သူရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်လေးကို မှာယူခဲ့ပါတယ်။ Paul က သတို့သမီးလောင်းလေးကို သူ့ရဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်လေးဖွက်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်ဆီ ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Erika က ကာတွန်းစာအုပ်လေးကိုမြင်ပြီး အံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Paul ရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
5. တယ်လီစကုပ်ဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
သူတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကို ကြယ်တွေကိုယ်တိုင် ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သူကတော့ လမင်းကြီးဆီကနေ အကူအညီ နည်းနည်းယူခဲ့ပါတယ်။ " ကိုယ့်ကို လက်ထပ်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့ စာပါတဲ့ တယ်လီစကုပ်အတွက် မှန်ဘီလူးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကောင်မလေးကို လကိုကြည့်လိုက်ဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
4. ဂိမ်းဆော့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
ဒီပုံထဲက အမျိုးသမီးကတော့ လက်ထပ်ခွင့်အတောင်းခံရပုံက ထူးခြားပါတယ်။" ကိုယ့်ကို လက်ထပ်ပါ" ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို သူမကိုယ်တိုင် ဆွဲပေးရမှာပါ။ သူမရဲ့ ချစ်သူက ဒူးထောက်ပြီး လက်စွပ်ကို အိတ်ထဲက ထုတ်ပြမှ ဂိမ်းဆော့နေတာမဟုတ်ဘဲ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတာဖြစ်ကြောင်း သိသွားပါတယ်။
3. Starbucks ကော်ဖီဆိုင်တွင် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
Austin Mann နဲ့ Rather Havenတို့နှစ်ယောက်လုံးက ခဏခဏခရီးထွက်နေရတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆုံဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ခရီးထွက်ခါနီးဆိုရင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အားတက်စေဖို့ လေဆိပ်က Starbucks ကော်ဖီဆိုင်မှာ စာတိုလေးတွေ တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ချန်ထားတတ်ကြပါတယ်။ Amsterdam လေဆိပ်မှာ Esther တွေ့လိုက်ရတာကတော့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ စာလေးပါ။
2. GPS Tracker ဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
GPSမှာ "ကိုယ့်ကို လက်ထပ်နိုင်မလား" ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်ဖို့အတွက် အပြေးဝါသနာပါသူ Ben Chudly က ကီလိုမီတာပေါင်းများစွာကို ပြေးခဲ့ပါတယ် ။ Ben က screenshot ကို သူ့ကောင်မလေး Olivia ကို ပြပြီး လက်ထပ်လက်စွပ်ကိုပါ ပေးခဲ့ပါတယ်။
1. အကဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း
ချစ်သူနှစ်ယောက်လုံးက ဝါသနာတူတာ ထူးခြားပါတယ်။ Phil Wright က ဒီဝါသနာကိုသုံးပြီး သူ့ကောင်မလေး Ashley နဲ့ အတူတူတွဲကနေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းပါပဲ။